Fandriampahalemana amin'ny Fetin'ny Reny - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Fiadanana amin'ny Andron'ny Mpinamana
Nisy tovolahy iray nanatona an’i Jesosy ary nanontany hoe: “Mpampianatra ô, inona no tsara hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? Manajà ny rainao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao” (Matio 19,16 ary 19 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Ho an'ny ankamaroantsika dia ny fetin'ny reny dia fotoana iray hankalazana ny fitiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanany, fa ho an'i Deborah Cotton kosa dia ny andron'ny reny dia ho tantaram-pitiavana manokana. Deborah dia mpanao gazety ary mpisolovava lava ela amin'ny tsy herisetra sy ny fanampiana ara-tsosialy. Nandany fotoana aman-taonany niasa izy nanampy ny olona tany amin'ireo faritra sahirana tany New Orleans malalany. Niova ny zava-drehetra tamin'ny Andron'i Neny tamin'ny 2013: isan'ireo olona 20 naratra nandritra ny tifitra nandritra ny filaharana izy. Rehefa nanapoaka afo ny andian-jiolahy roa tao anatin'ny fijerin'ny olona tsy nahita tsiny, dia tratran'ny kibo i Deborah; Nanimba ny taova lehibe misy azy ny bala.
Nahatratra fandidiana telo-polo niainany izy fa handratra mandrakizay; fampahatsiahivana ny vidin'ny serivisy ataon'izy ireo amin'ny fiarahamonina. Inona no dikan'ny Andron'ny Neny ho azy izao? Niatrika safidy izy hamerina ny fahatsiarovana mahatsiravina tamin'io andro io sy ny fanaintainana mifandray aminy, na ny fanovana ny zava-doza niainany ho zavatra tsara amin'ny alàlan'ny famelan-keloka sy fitiavana. Nifidy ny fomba fitiavana i Deborah. Nanantona ilay lehilahy izay nitifitra azy izy ary nitsidika azy tany am-ponja. Te handre ny tantarany izy ary hahatakatra ny antony nahatonga azy ho mahatsiravina. Hatramin'ny fitsidihany voalohany dia nanampy ny mpanao menatra nanova ny fiainany i Deborah ary nifantoka tamin'ny fiovany ara-panahy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
Rehefa nandre momba ity tantara tsy mampino ity aho dia tsy afaka ny tsy hieritreritra ny fitiavana manova ny fiainan’ny Mpamonjy antsika manokana. Sahala amin’i Debora, izy koa dia mitondra ny takaitra amin’ny fitiavana, fampahatsiahivana mandrakizay ny vidin’ny asa fanavotana ny olombelona. Mampahatsiahy antsika i Isaia mpaminany hoe: “Nolefonina noho ny fahotantsika Izy. Voasazy noho ny fahotantsika Izy - ary isika? Efa mihavana amin’Andriamanitra isika izao! Ny feriny no nahasitranana antsika » (Isaia 53,5 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Ary ny zavatra mahavariana? Jesosy dia nanao an-tsitrapo izany. Talohan'ny nahafatesany dia fantany ny fanaintainana izay hijaliany. Raha tokony hivily kosa dia nandoa an-tsitrapo ny vola rehetra hanamelohana sy hanavotra ny otan'ny zanak'olombelona rehetra, ny hihavana amin'Andriamanitra, ary hanafaka antsika amin'ny fahafatesana mandrakizay. Niangavy ny rainy izy hamela ireo olona nanombo Azy tamin'ny hazo fijaliana! Tsy manam-petra ny fitiavany! Mampahery tokoa ny mahita hoe ny famantarana ny fampihavanana sy ny fanovana ny fitiavana miely manerana an'izao tontolo izao ankehitriny amin'ny olona toa an'i Deborah. Naleony nifidy fa tsy fitsarana, famelan-keloka fa tsy famaliana. Amin'ny Androm-pianakaviana ho avy dia afaka mahazo fitaomam-panahy amin'ny ohatra nasehony isika: niantehitra tamin'i Jesosy Kristy, nanaraka azy, nihazakazaka nanao toy ny nataony tamin'ny fitiavana.